မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ကရင်ကရင် ဘယ်လိုထင် ~ စောက်ရမ်းပဒဲကော အရိပ်တွေမြင်
ကရင်ကရင် ဘယ်လိုထင် ~ စောက်ရမ်းပဒဲကော အရိပ်တွေမြင်
ခေါင်းစဉ်ကြမ်းတော့ လန့်သွားကြမလား မသိဘူး ။
အမှန်တော့ ကိုယ့်ဖင်ကိုယ်လှန်ပြရတာ သိပ်ကောင်းလှတယ်တော့ မဟုတ် ။ အထူးသဖြင့်
ကရင်လို ရေးဖို့အဆင်မပြေလို့ လူလယ်ခေါင်ထွက်ပြီး လှန်ရတာ ပိုမကောင်းတာတော့ အသေ
ချာ ။ ဒါပေမယ့် ဆိုရေးက ရှိလာခဲ့ပြီကိုး ။
◊ တစ်လောကတော့ မန်းရောဘတ်ဇံတစ်ယောက် ကလို့ထူးဘော ဥက္ကဌရာထူးကနေ ရွေ့
လျောသွားတယ် ။ (လင့်)
◊ ခုတစ်ခါ ဘားအံမှာ ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ဖို့ KNU နဲ့ KNLA တို့ သိပ်အဆင်ပြေကြပုံမရ ။ (လင့်)
ဘာတွေ ဖြစ်နေကြပြီလဲ ။ အမြင်မတော်တော့လို့ တစ်ယောက်ထဲအမြင်ကို ပြောကြည့်ပါမယ် ။
ကရင့်အဖွဲ့စည်းတွေ ခုလိုဖြစ်နေကြတာကို နွားကွဲရင်ကျားကိုက်မယ်တို့ ၊ ဟင်္သာကိုးသောင်း
ဇာတ်ခင်းတာတို့ ၊ စစ်အာဏာရှင်တွေက သွေးထိုးခွဲထုတ်တာတို့ဆိုတဲ့ ဖန်တစ်ရာ ရိုးအီနေတဲ့
စကားတွေနဲ့ မခိုင်းနှိုင်းချင်ဘူး ။
အရှင်းဆုံးနဲ့ အတိုဆုံးပြောရရင် - လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာ နိုင်ငံရေး
ဦးဆောင်သူနဲ့ စစ်ရေးအကောင်ထည်ဖေါ်သူတွေဆိုတာ တွဲလျက်ရှိတဲ့ အမွှာပူးတွေခေါ်ခေါ် ၊
ချက်ကြိုးဆက်နေတယ် ပြောပြော ၊ ပိုင်းခြားလို့ မရစကောင်းဘူးဆိုဆို အတူတူပါပဲ ။
ဒီတော့ ကွဲကြမယ် ခွဲကြမယ်ဆိုရင် ဘာနဲ့တူမလဲ ….
ကျနော့်ကိုယ်ပိုင် အတွေးအရတော့ ဒီလိုကွဲတာဟာ ရုပ်နဲ့ နာမ် (ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ဝိညာဉ်) နှစ်ခု
ကို ခွဲထုတ်လိုက်တာနဲ့ သွားတူပါတယ် ။
အငွေ့သဘောဆောင်တဲ့ နာမ်ဟာ ဦးဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်ပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ လက်တွေ့
လုပ်ငန်းတွေ ဖက်မှာတော့ မစွမ်းဆောင်နိုင်လှသလို ၊ တစ်ဖက်က ရုပ်ခန္ဓာဟာလည်း နာမ်ကို
ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ရုပ်ရှင်ထဲက Zombie တို့ Vampire တို့လိုပဲ စွမ်းအားအင်မတန်မြင့်ပြီး လွယ်
လွယ်နဲ့ ဖျက်ဆီးလို့မရပေမယ့် ၊ အသိမဲ့ အတွေးခေါ်မဲ့တာကြောင့် သူတို့အတွက်လမ်းဆုံးဟာ
မခွဲခြားကောင်းတာကို ခွဲခြားလိုက်တာနဲ့ နှစ်မျိုးလုံးရဲ့ ပျက်စီးရာလမ်းဟာ အာမခံချက်တွေ
"ပြဿနာက သူတို့ကို လေးစား မှီခို မျှော်လင့်နေသူတွေ ၊ သူတို့ကိုယ်စားပြုတယ် ဆိုသူ
တွေနဲ့ သူတို့အပေါ် တည်မှီနေတဲ့ အနာဂါတ်တွေပါ ။"
ဒါတွေကို အပြည့်အစုံထည့်မတွက်ပဲ ထင်ရာစိုင်းကြရင်တော့ ကျနော့်ခေါင်းစဉ်လို စောက်ရမ်း
ပဒဲကော အရိပ်အယောင်တွေ မြင်ရတယ်ဆိုတယ် လွန်မလား ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီး စေတနာရှေ့ထား ပြောလိုက်ချင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လူကြီးသူမနဲ့ လက်လှမ်းမီသူတွေက အဖွဲ့စည်းမှာ ချွတ်ယွင်းချက်တွေ ဗလပွနဲ့မို့
ဘယ်ကစပြောရမှန်း မသိဘူးလို့ ဆိုသူတွေက များပါတယ် ။ ဒါကိုထောက်ပြီး ပြောချင်တိုင်း
ပြောလို့လည်း မကောင်းပြန်လေတော့ အပေါ်ယံလျှပ်ပြီးပဲ ပြောပါ့မယ် ။
ပထမ ကွဲကွာခွဲခွာတယ်ဆိုတာ မဖြစ်ခင်ကပဲ ပိုကာကွယ်ဖို့ လွယ်ပါတယ် ။ အဖွဲ့စည်းတစ်ခု
အတွင်း တစ်ကဏ္ဍနဲ့တစ်ကဏ္ဍ လေးစားနားလည် ဖေးမကူညီမှုတွေ အပြန်လှန်ထားတဲ့ အလေ့
အထ ထန်းသိမ်းနိုင်ကြရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ။ “လူကိုဖယ်ပြီး မူကိုတည်”ရင် ကွာဟမှုတွေ
မစေ့စပ်နိုင်ရင်တောင် တစ်နေရာမှာတော့ အချင်းချင်း တွဲဆက်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
ခုမတော့ များမကြာခင်က အဖွဲ့စည်းကို ခပ်ကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်မယ့်သူ မရှိတော့တာကြောင့်
ပွင့်လင်းပြီး အများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးလျှောက်
လှမ်းဖို့ အခွင့်လမ်း ပွင့်ခဲ့တယ် ။ တစ်ကယ်တန်းကျ ဒီအခွင့်လမ်းကို လက်လွှတ်လိုက်ကြပြီး
ကိုယ်ပိုင်အစွဲတွေကို ရှေ့တန်းတင် လာကြသလား ။ တစ်မိသားစု ၊ တစ်ရွာ ၊ တစ်စုတစ်ဖွဲ့အ
ရေးတွေများ လုပ်နေကြသလား မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာတွေ ဖြစ်လာပြီ ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို
ယိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုတွေကို စွန့်ပစ်လိုသူတွေရှိရင်တော့ ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ်
ကြိုးကွင်းစွပ်မိသလို မိုက်မဲရာကျပါလိမ့်မယ် ။
တစ်ဖက်မှာကလည်း စစ်ရေးမှာ တာဝန်ထမ်းသူတွေဟာ ပေးဆပ်မှုအများဆုံး ရှိခဲ့ကြတဲ့အပိုင်း
ကို အသိမှတ်ပြုဖို့ လိုပေမယ့် ၊ ငါတို့သာ အရေးအပါဆုံး ငါတို့လုပ်ရင် အားလုံးဖြစ်တယ်လို့ စိတ်
ထားတွေများ ဝင်လာကြသလားလို့ သံသယဖြစ်စေတဲ့ အပြုမူတွေက မြင်လာရပြန်တယ် ။
ဒီနေရာမှာ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြည်မက စစ်အာဏာရှင်တွေ လုပ်ခဲ့သလိုပဲ “ငါတို့မှ
ငါတို့”ဆိုရင်တော့ အတော်ပြဿနာရှိလာပြီ ။ ကိုယ် ကိုယ်စားပြုဖို့ ကြိုးပမ်းနေသူတွေ ဒုက္ခရောက်
ခဲ့ကြရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုလျစ်လျူပြီး ၊ ကိုယ့်ကို ဒီအခြေနေရောက်အောင် ပို့ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကို
အတုခိုးသလို ဖြစ်နေမှာသေချာတယ် ။ လက်နက်နဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့အရည်ချင်း ရှိရုံနဲ့လည်း အားလုံး
ကို ကိုယ်စားမပြုပါ ။ ဒီကြားထဲ ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်တာပါလို့ ဆင်ခြေပေးသူများပါ
ရှိလာရင်တော့ အတော့်ကို လွဲနေပြီလို့ ပြောရမယ် ။
အရင်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ် ။ ကရင်လူမျိုးတွေ အခြေချရာ နေရာတွေဟာ အများကြီးကွဲနေပါတယ်။
ပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ နယ်စပ်ဆိုပြီ အကြမ်းဖျင်းခွဲလို့ရရာမှာ ပြည်တွင်းမှာတောင် ရေမြေ ဆက်စပ်မှု
အရ တနင်္သာရီ ၊ မွန် ၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ ပဲခူးတိုင်းမှာ နေသူတွေနဲ့ ရန်ကုန် ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နေသူ
တွေလို့ ထပ်ခွဲနိုင်တယ် ။ ပြည်ပမှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာတင် ရှိနေတဲ့ သိန်းချီတဲ့သူတွေနဲ့ အ
ခြားနိုင်ငံပေါင်းစုံကို ရောက်နေသူ တွေဆိုပြီး ခွဲနိုင်သေးတယ် ။
သေချာတာက အဲဒီထဲက ကရင်စကားတတ်တတ် မတတ်တတ် ၊ ဒုံးကလို့တတ်တတ် မတတ်
တတ် ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကရင်လို့ မသတ်မှတ်ပဲ အခြားလူမျိုး အခြားနိုင်ငံသားလို့ပဲ ခံယူယူ သူတို့ရဲ့
အသားရေ ၊ အလေ့ထ ၊ မေးရိုးကားကား ခြေသလုံးကြီးကြီးတွေကို ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး ။ သူတို့
ကိုယ်ကိုသူတို့ ကရင်လို့မပြောလဲ ကရင်တွေပါပဲ ။
အဲဒီတော့ အဲသည်လူစုတွေထဲက ဘယ်အစုကို ဘယ်သူတွေက တိုင်ပင်ပြီးပြီလဲလို့ မေးစရာရှိ
လာတယ် ။ အချို့အဖွဲ့စည်းတွေက သူတို့ထိန်းချုပ်ရာမြေထဲမှာ လူထုကို မေးပြီးပြီ တိုင်ပင်ပြီးပြီ
လို့ ဆိုနိုင်ကြတယ် ။ ဟုတ်ပြီ .. ဒါဆို ကျန်တဲ့သူတွေကကော ကရင်တွေ မဟုတ်ကြတော့ဘူး
လား ။ ကျယ်ပြန့်တဲ့အမြင် ရဖို့ခက်နေတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုက နယ်မြေခံလူထုကို တိုင်ပင်ရုံနဲ့ လူထု
တစ်ရပ်လုံး ၊ လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကို ကိုယ်စားပြုမယ့် စကားတွေ ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ အထွေ
ထူး ရှင်းပြစရာလိုမယ်မထင်ဘူး ။ ဒါတွေဟာ ပကတိ သဘာဝတွေနဲ့ အရှိတရားတွေပဲ ။ ဒါတွေ
ကနေ သွေဖည်ချင်ရင်တော့ ဗိုလ်စောက်ရမ်းတွေလို့ပဲ ရှင်းရှင်း နာမည်တပ်ရတော့မယ် ။
လုပ်ချင်ရာကို အရမ်းအရမ်းလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးနှစ်ခုကို နမူနာပြောချင်တယ် ။
ပထမက စောဘဦးကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးစဉ် ။
သူ့ကို ရန်သူက ကျားကုတ်ကျားခဲ လိုက်ခဲ့သလို ၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း နောက်ဆုံးကျည်ဆံ
တစ်တောင့်အထိ အကာကွယ်မယူပဲ မတ်တပ်ရပ်ရင်ဆိုင်ပြီး သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပီသစွာ စံ
ဒီလိုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အလဟဿဖြစ်အောင် ဘယ်သူတွေ လုပ်ခဲ့သလဲ ။ အတော်
များများက သစ္စာဖေါက် ကရင်တစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုပြီး အပြစ်ဖို့ကြတယ် ။ မေးစရာက အဲသည်
သစ္စာဖေါက်ဆိုသူဟာ စောဘဦးကြီးကိုတောင်မှ သိခဲ့ရဲ့လား ။ နောက်တစ်ခုက အဲသည်လူက
ကရင်အချင်းချင်းကိုစိတ်နာပြီး ရန်သူတပ်ကို သတင်းသွားပေးရလောက်အောင် ဘယ်သူ ဘာ
အကြောင်းတွေက ဘယ်လိုတွန်းပို့ခဲ့သလဲ ။ အသေးစိတ်ကို နောင်ထွက်လာမယ့် မှတ်တမ်းစာ
အုပ်တွေမှာ ပါလာကောင်း ပါလာမှာမို့ အကျယ်မချဲ့ချင်ပေမယ့် လိုရင်းကတော့ စောဘဦးကြီးနဲ့
အတူလိုက်လာခဲ့သူတွေရဲ့ မဆင်မခြင် လုပ်ကိုင်ခဲ့မှုတွေကြောင့်ပါ ။
ကရင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တစ်ယောက် ။ သူ့ရဲဘော်ရဲဘက် အချင်းချင်းတွေရဲ့ ရက်ရက်စက်
စက် စွပ်စွဲသတ်ဖြတ်တာကို ခံခဲ့ရတယ် ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျောင်းကပြန်လာတဲ့ သူရဲ့သား
က အကွယ်အကာတွေနောက်ကနေ ချောင်းကြည့်ပြီး တွေ့သွားခဲ့တယ် ။ အကျိုးဆက်က လက်
နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ဒီကျောင်းသားလေး မြို့ပေါ်တက်သွားခဲ့တယ် ။ အရွယ်
ရောက်တော့ ရန်သူ့တပ်ထဲဝင်ပြီး တစ်သက်လုံး တာဝန်ကျေကျေ စစ်မှုထမ်းပေးခဲ့တော့တယ် ။
သူ့ရဲ့ သားသမီးတွေလက်ထက်မှာ ဒီအမုန်းမီး တန့်သွားခဲ့ပြီး ဘားအံ မဲဆောက်တွေမှာ ကျင်
လည်နေကြပေမယ့် မေ့ပျောက်ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ သေတစ်ပန် သက်တစ်ဆုံး ဒီအသိကို
ဒီဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးမှာ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလို့ လုပ်ရပ်အတိကျတွေကို ဇာတ်ရှိန်
မြင့်အောင် စာမဖွဲ့ချင်ပေမယ့် ထင်ရာစိုင်းခဲ့ကြတဲ့ ကရင်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ အရိပ်အမွက်တော့
ပုံပေါ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ် ။
ဒီတော့ ခုကော .. ဒီလိုစရိုက်မျိုးတွေ နောက်မှာကျန်ခဲ့ပြီလား … ဖက်တွယ်ပြီး ဆက်သယ်လာ
တုန်းလား ။ သေချာတာကတော့ ဖက်တွယ်ထားသူတွေ အတော်များများ ရှိနေသေးတာပဲ ။ ထစ်
ကနဲဆို သစ္စာဖေါက်လို့ စွပ်စွဲချင်ကြတယ် ။ ဒီလောက်နဲ့မပြီးပဲ အဲဒီလို အလွယ်သတ်မှတ်လိုက်
သူတွေအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေလည်း လုပ်တတ်ကြသေးတယ် ။ ဒီကြားထဲ ချောင်းနေတဲ့ ဒလန်
တွေက အဆင်းမှာ ဘီးတပ်ပေးလိုက်ရင် ရှူးရှူးရှားရှားနဲ့ အသိစိတ်တွေက ပျောက်ချင်ကြတယ် ။
ဒီတော့ ဒါတွေကို ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးမတော့ အေးအေးမနေနိုင်တဲ့ကိုယ်ပါ ထင်ရာ
စိုင်းသမားတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ရပြီ ။
ကရင်ရယ်လို့မှတော့မဟုတ် ၊ ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာကိုမှ မထိခိုက် မပျက်စီးစေချင်ပေမယ့် ၊
ကိုယ့်အရင်းချာမို့ နာနာထောင်းတော့ ခံရခက်သူတွေလည်း ရှိလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ချွတ်ယွင်းချက် ၊
အားနည်းချက်နဲ့ ကောင်းအောင်ပြင်ဆင် စရာတွေရှိရင် မြင်ရင် အချင်းချင်းပြောတာက ပိုသင့်တော်
တယ်လို့ ထင်တယ် ။ ရှမ်းတွေရဲ့အားနည်းချက်ကို ကရင်ကသွားပြောရခက်သလို ၊ ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာတွေ
လွဲချော်နေတာတွေရှိရင် ဟိန္ဒူတွေက ဝင်ပြောပေးဖို့ မသင့်သလိုပါပဲ ။ ဒီလိုအယူအဆတွေကို အ
ခြေခံပြီး ကိုယ့်ကရင်အဖွဲ့စည်းတွေအပေါ် တတ်နိုင်သမျှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထောင်းထုတာကို နား
လည်ပေးနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ် ။
ဒီနေရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ပို့စ်က မှတ်ချက်တစ်ခုကို ပြန်တင်ပြချင်တယ် ။
သိလာကြုံလာခဲ့သမျှကို မူတည်ပြီး ခြုံငုံပြောရရင် -
“ကရင်တွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်မှာ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ် ၊ ဒါပေမယ့်
နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတွေ မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး ။ စစ်တိုက်ကောင်းသူတွေဖြစ်တယ် ၊ ဒါပေ
မယ့် စစ်နိုင်အောင်တိုက်တတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကောင်းတွေ ဖြစ်မလာခဲ့ကြဘူး”
လို့ အကျဉ်းချုပ်ရပါလိမ့်မယ် ။
ဘယ်သို့ပင်ဖြစ်စေ မျှော်လင့်ချက်အားလုံး ကုန်ဆုံးနေသလားဆိုရင်တော့ … မကုန်သေး မဆုံး
သေးပါဘူးလို့ ဆိုရမယ် ။ ကံ ဥာဏ် ဝိရိယတွေအပေါ်မူတည်ပြီး သမိုင်းကို ပြင်ဆင်ဖို့ လမ်းကြောင်း
ပေးနိုင်တာလေးတွေ ရှိတယ် ။ သဘောထားသော်၎င်း လက်တွေ့သော်၎င်း ကွဲကွာခွဲခွာတယ်ဆို
တာကို ပေါင်းစုစည်းရုံးဖို့ အခွင့်လမ်းတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားနိုင် အကောင်ထည်ဖေါ်လို့ ရနိုင်
အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သီအိုရီ(ပုံသေနည်း)တစ်ခု ပြောပြချင်တယ် ။ “စနစ်တကျ ကစဉ့်
ကလျားဖြစ်ခြင်း” လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ် ။ ပုံပျက်ပန်းပျက်နဲ့ ဆက်စပ်လို့မရလောက်အောင် ကွဲပြား
ဖြစ်တည် လုပ်ကိုင်နေကြပေမယ့် အသေချာ ခြုံငုံသုံးသပ်မြင်နိုင်ရင် အရာရာဟာ သူ့အစုနဲ့သူ စ
နစ်တကျ ဘောင်အတိုင်းတာ တစ်ခုအတွင်းမှာသာ ပရမ်းပတာဖြစ်နေပြီး အားလုံးရဲ့ ဦးတည်ရာ
လမ်းကြောင်း ၊ သဘောသဘာဝနဲ့ ရလဒ်တွေမှာ တစ်ထပ်ထဲနီးပါး ရှိနေတတ်တဲ့ အခြေနေတစ်
ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ ပုံသေနည်း အဆိုပြုချက်တစ်ခုပါ ။ တစ်စုတစ်စည်းထဲ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ကြတဲ့
အနေထားမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အနေထားဖြစ်စဉ်တစ်ခု လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ။
ဆက်စပ်ပြောလို့ရတာက သေချာပြီး တူညီတဲ့တဲ့ ဦးတည်ချက်တစ်ခုဆီကို တစ်ညီတစ်ညွတ်
တည်း မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်ကြခြင်းအားဖြင့် အ
ဆုံးမှာ ပန်းတိုင်ဆီ အတူရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားပါ ။
ဒီလိုပဲ လက်ရှိ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအပါဝင် အဖွဲ့စည်းတွေဟာ ကွဲတန်ကွဲ ခွဲတန်ခွဲ ၊
တစ်ခါတစ်ရံလည်း ပေါင်းတန်ပေါင်း စုတန်စုပြီး အင်အားစုကလေးတွေအနေနဲ့ အားကြိုးမာန်
တက် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုရင် သွေးခွဲသပ်ရှိုသူတွေ ဘာမှမတတ်နိုင်လောက်အောင်
ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့ အနေထားတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ၊ အများနဲ့ အသင့်တော် အဆင်ပြေဆုံး ပန်း
တိုင်တစ်ခုဆီကို ရောက်နိုင်မှာပါ ။ ခနော်ခနဲ့ အိယောင်ဝါး ၊ အပြောနဲ့အလုပ် မညီသူတွေလည်း
နည်းနိုင်သမျှနည်းဖို့တော့ လိုမှာပေါ့ ။
လက်လှမ်းမီသလောက် ပြောကြည့်တာပါ ။ မှားနိုင်သလို မပြည့်စုံတာလည်း အများကြီး ရှိမှာပါ ။
ခုလို အချိန်ကုန်ခံ လာဖတ်တာကိုပဲ ကျေးဇူးပါ ။
၀၂ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၂
Posted by မန်းကိုကို at 10/02/2012
ဆက်ရေးမယ့်ဟာကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ဖို့ စောင့်နေပါတယ်။
မန်းကိုကို October 4, 2012 at 11:59 PM
ဖူ့တာမိုက် ဘလော့က ဗမာတစ်ယောက် ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စာတိုတစ်စပါ ~
ခင်ဗျားတို့ ကရင်တွေမှာ ထင်ရှားတဲ့အားနည်းချက်တခုက ဘာလဲဆိုတော့ တယောက်နဲ့တယောက် တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ကြပြီဆိုလျင် အခေါ်အပြော မလုပ်ကြတော့ဘူး။
အထူးသဖြင့် ကျုပ်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စစ်အစိုးရကို တိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်အချင်းချင်းဘယ်လောက်ပဲ သဘောထားကွဲကွဲ သူတို့ရှေ့မှာ ညီအစ်ကိုရင်းချာတွေလို နေပြတတ်ရတယ်။
အဲဒါ လိုတယ်နော်၊ သိပ်လိုနေတယ်။
ဒီကနေ့ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမှာတော့ ရွှေဟင်္သာသတင်းဋ္ဌာနက ဒီလိုပြောထားတယ် ~
ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ၏ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် (၃) ဦးအား တာဝန်မှ ရပ်စဲ လိုက်ရခြင်းသည် KNU နှင့် အစိုးရ တို့၏ အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး အနှစ် သာရကို စတင် ခံစားလိုက်ရပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဗဟို ကော်ဝင်လည်းဖြစ် ခရိုင် အတွင်း ရေးမှူး တဦး ဖြစ်သူက ဆိုပါသည်။
နွားကွဲရင် ကျားဆွဲမယ် ?
=== October 5, 2012 at 11:50 AM
ခုပဲ သောသီးခိုစီဘောမှာ သွားပြောလိုက်တယ်.
ကြော်ငြာပါဝင်ပေးထားတယ်. ကော်မရှင်ပေးတော့. ;)
===: ချီးတဲ့မှပဲ အချင်းချင်း ဆော်ကုန်ကြတာကို မှန်တယ် မှားတယ် လာလုပ်နေကြသေးတယ်. မှတ်ထား. ဘယ်ဟာမှ မမှန်ဘူး. ဟိုးဖက်လှည့်ကုန်းလည်း မင်းတို့ပဲ ဖင်ခံရမယ်. ဒီဖက်လှည့်ကုန်းလည်း မင်းတို့ပဲ ဖင်ခံရမှာ.
===: နိုင်ငံရေး. အဖွဲ့စည်း စီမံခန့်ခွဲရေး. စီးပွားရေး လုပ်မတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ သူများက တကူးတက သွေးလာခွဲစရာတောင် မလိုဘူး.
5 Oct 12, 11:25 AM
===: ကိုယ့်အဖွဲ့စည်း ပြိုကွဲရင် ဘယ်သူ့ကို အဖေခေါ်ရမှန်း မသိတော့မယ့်သူတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားပဲ. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ရှေ့တန်းတင်ချင်ကြတဲ့ ဘယ်သူမှ မတင်မြှောက်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် စောက်ရှက်လဲကွဲ
5 Oct 12, 11:30 AM
===: ဒုက္ခလည်း ရောက်ကြရတော့မယ်. ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြည့် ဗိုလ်ချုပ်တွေမှ ရိုက်သတ်လို့ မကုန်ဘူး. ဘယ်တော့မှ ရာထူးမပြုတ်ကြဘူး. အမှားရှိရင် inactive position ဆိုပြီး ကိုယ်ပိုင်စစ်သား မရှိတဲ့နေရာ ရောက်သွားတယ်.
5 Oct 12, 11:34 AM
===: ပြီးရင် ကိုယ့်ဆီမှာ တပ်ရှိတယ်. လက်နက်ရှိတယ်ဆိုပြီး အဖွဲ့စည်းထဲမှာ ဘာမှ စောက်ဂရု မစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ စစ်ဘုရင် ပေါက်စလေးတွေလည်း သတိထားကြ. အဲဒါ မျိုးချစ်မဟုတ်ဘူး. မျိုးဖြုတ်လို့ခေါ်တယ်.
5 Oct 12, 11:36 AM
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးဟာ ပထမပဲ. နိုင်ငံရေးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အားလုံးနီးပါးပါတယ်. အခုဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ ကိုင်တွယ်တာဟာလည်း နိုင်ငံရေးပဲ ဟေ့. . . မသေမချင်း သတိရကြ
5 Oct 12, 11:40 AM
မန်းကိုကို October 5, 2012 at 10:53 PM
အေး ကောင်းတယ် ၊
ဒါပေမယ့် သိပ်မဆဲနဲ့ကွ ၊
သိပ်ဆိုးရင် ငါဖျက်နေရဦးမယ် ။
ကော်မရှင်ကတော့ ကြော်ငြာကို ကြော်ငြာနဲ့ပဲ ပြန်ဆပ်တော့မယ်ကွာ :)
မန်းကိုကို October 6, 2012 at 9:03 AM
ခြေမမကောင်း ခြေမဖြတ် ၊ လက်မမကောင်း လက်မဖြတ်ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ် ။
အဲဒီလို မကောင်းဘူးထင်တိုင်းဖြတ်ရင် ခြေလက်အင်္ဂါ ဘယ်နှစ်ချောင်းလောက် ကျန်နိုင်ကြမလဲ ။
နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်နီးပါး ရှိခဲ့တဲ့ အဖြစ်တစ်ခုကို ကြည့်ရအောင် ။
ခရစ်ယာန်နဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ တိုက်နေခဲ့ကြတဲ့ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲထဲမှာပါ ။
မွတ်ဆလင်ဆေးဆရာတစ်ယောက် ခရစ်ယာန်တပ်စခန်းတစ်ခုထဲ ရောက်နေတယ် ။
အခန့်သင့်လေတာကြောင့် ခရစ်ယာန်ဆေးဆရာတစ်ယောက် ဒဏ်ရာရသူတွေကို ဆေးလိုက်ကုနေတာ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ် ။
ခရစ်ယာန်ဆေးဆရာဟာ ဆေးဆရာနဲ့မတူပဲ အာဏာပါးကွက်သားနဲ့ တူနေတယ် ။
ဒဏ်ရာရလာသူတွေကို စစ်ဆေးပြီး သူကုဖို့ မတတ်နီုင်တဲ့ ခြေလက်ဒဏ်ရာတွေကို သူ့နောက်က လိုက်လာတဲ့လက်ထောက်ကို ဖြတ်ပစ်ခိုင်းနေတယ် ။ သူ့လက်ထောက်ကလည်း ပုဆိန်ကြီးတစ်ချောင်းထမ်းပြီး တာဝန်ကြေကြေ ခုတ်ထစ်ဖြတ်တောက်နေတယ် ။ ဆေးဆရာ သွားရာလမ်းတစ်လျှောက် တဒုတ်ဒုတ်ဖြတ်သံ တအားအားအော်သံတွေနဲ့ပေါ့ ။
စာရင်းချုပ်တော့ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာ ခရစ်ယာန်စစ်သားတွေ တိုက်ပွဲထဲ ကျဆုံးတာထက် ရလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ သေကြေကြရတာက ပိုများတယ်လို့ သမိုင်းဆရာတွေက ဆိုတာ မဆန်းပါဘူး ။
မွတ်ဆလင် ဆေးဆရာကတော့ မပြန်ခင် သူ့မိတ်ဆွေကို ပြောသွားတယ် ။ ငါတို့ကတော့ တော်ရုံဒဏ်ရာတွေကို ဆေးမြစ်ဆေးရွက်တွေနဲ့ ကြပ်ထုတ်ထိုးတန်ထိုး ၊ ဆေးတိုက်တန်တိုက် ၊ ခွဲတန်ခွဲပြီး ကုကြတယ် ။ မင်းတို့ဆီမှာ လူ့ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကို ခုလိုဖြုန်းတီးနေကြတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ တဲ့ ။
သင်္ခန်းစာယူချင်ရင် ယူလို့ရတာပေါ့နော ။
မန်းကိုကို October 7, 2012 at 2:00 PM
ယေဘုယျအားဖြင့် ကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ ။
"အပြင်းထန်ဆုံးစွပ်စွဲရလျှင် အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေးကို နာရီအနည်းငယ်သာ ဆွေးနွေးပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် ရန်သူနှင့် လျိူ့ဝှက်စွာ ဆွေးနွေးမှုများ ရှိနိုင်သည်ဟု ကောက်ချက်ချလို့ရပါသည်။" - ဆိုတဲ့ အထင်မျိုးကိုတော့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ် ။
လောလောဆယ် များများစားစား ပြောစရာမရှိပေမယ့် အတွေ့ကြုံများတဲ့ လူဟောင်းကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ထိရောက်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပဲ လက်ဆင့်ကမ်းချင်ပါတယ် ။
"ဖြုတ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ၊ ဒီလောက်နဲ့ ပြီးသွားမလား" တဲ့ ။
ဆက်တွေးစရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကိုတော့ ဖတ်သူကိုယ်တိုင်က အဖြေထုတ်ရပါလိမ့်မယ် ။
မန်းကိုကို October 12, 2012 at 12:39 AM
လွန်ခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ ၀၇၊၁၀၊၂၀၁၂ နေ့မှာ မိတ်ဆွေတစ်ချို့နဲ့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်လို့ ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အခက်အခဲကိစ္စကို နည်းနည်း ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ် ။
ခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် အပစ်ရပ်ဖို့ ဆွေးနွေးကတည်းက နေ့တစ်ဝက်ထဲဆွေးနွေးပြီး အများဆန္ဒမဟုတ်ပဲ စာချုပ်ချုပ် လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာကအစ အစပ်ဟပ် အဆီငေါ်မတည့်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ရာမှာ ၊ ဘယ်လိုမှ ပြန်ဆွဲစေ့လို့ မရတဲ့အနေထားကြောင့် ဖြစ်သွားခဲ့ရတာလို့ ယေဘုယျ နားလည်မိပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်သာထင်သာ ရှင်းလင်းချပြမှုတွေမရှိပဲ ၊ မျက်လှည့်ဆရာလို ဘာမှမရှိတဲ့ လေထဲကနေ ဟပ်ချလောင်းဆိုပြီး လုပ်လို့မရကြောင်းပဲ အတိုချုပ် မှတ်ချက်ပြုလိုက်ရပါတယ် ။
မှတ်မှတ်ရရ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေဟာ လူအတော်များများ မြင်ထားကြသလို ကွဲနေပြဲနေ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာတွေဟာ ထင်သလောက် မမှန်ဘူးဆိုတာပါ ။ သက်သေပြစရာ မရှိတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်သဘောထား မှတ်ချက်တစ်ခုသာလို့လည်း သဘောထားနိုင်ပါတယ် ။
Karen can survive difficulties and pooreness but can not resist richness.
မန်းကိုကို October 15, 2012 at 4:41 PM
ခုလို ထပ်ဖြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ရင်ကို လာရိုက်ခတ်သော ခွေးလှေးယားသီးများ